रिक्सा चलाएर अपांग श्रीमान अनि छोरी पाल्दै यी नेपाली चेली, सम्मान स्वरुप सेयर गरौ ! – Khabar PatrikaNp
धनकुटा । आहा कस्तो राम्रो काम हाम्रै नेपाल अर्थात धनकुटा घर भई धरान बस्दै आएकी कविता राई भने फरक किसिमकी छिन । जो अपा’ङ्ग श्रीमानको पालन पोषणका लागि रिक्सा अर्थात् सिटी सफारी चालक छिन । श्रीमान को जन्म जात नै एउटा खु’ट्टा छैन मैले नै उहाँलाई पाल्दै आएको छु उनले भनिन । धनकुटा रहँदा नै विवाह भएकी उनी आफ्नो परिवार धान्नका लागि सहर आईन । धरान आएपछि के गर्ने कसो गर्ने उनले केही सोच्नै सकिनन । उनले आफैले जसोतसो एउटा सिटी रिक्सा किनिन र कु’दाउन थालिन । बजारको प्रतिस्पर्धामा आएपछि उनमा आफ्नो कमाइप्रति गौरव गर्ने भावना र समाजको सम्मान दुवै थपिएको छ ।
अहिले रिक्सा चलाएर परिवार धान्न सक्दा उनी खुसी छिन् । एउटा छोरी छन् उनको पढाइ खर्च र श्रीमान पाल्न पुगेकै छ । अलि अलि बचत पनि गर्ने गरेको छु । उनले भनिन् । पुरूषले मात्र सवारीसाधन चलाउन सक्छन् भन्ने सोंच भएका र श्रीमानको कमाइमा मात्रै बाँच्ने महिलाका लागि यो ग’तिलो झा’पड उनले पनि ठा’नेकी छिन् पहिला पहिला त केही गर्न सक्दिनँ कि जस्तो लाग्थ्यो उनले थपिन् र आँ’ट कसेर निस्किएपछि सम्भव हुने रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेको छु । उनी प्राय भा’नुचोकमा भेटिन्छिन् ।
यस्तै धरानकी मिरा लामा ९ वर्ष अघि श्रीमान बितेपछि आफैले केही गर्नुपर्छ भन्दै लागिपरिन ।
Prevपाँचथरको ‘मृदङ्गा’ झरना भनेर नामकरणमा विवाद
Nextअध्यक्ष महत्तकी आमा बाढीमा बे’प’त्ता
सरिता गिरीले तराई मधेश वृहत लोकतान्त्रिक अभियान गठन ग’रेर मधेशको राजनीतिमा पुनः प्रवेश
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूमि फिर्ता भएरै छाड्छ : प्रधानमन्त्री ओली
दुखत खबर !! बेलायतबाट नेपाल आएका ५ जनामा नयाँ प्रजातिको भाइरस पुष्टि
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (32657)